Semen Cannabis Oligopeptide Powder - Warshad Soo Saaraha
Semen Cannabis budada Oligopeptide waa peptide yar oo molecule ah oo laga soosaaray shahwada cannabis peptides by heerkulka hooseeya ee isku dhafan enzymatic hydrolysis. Waxay hodan ku tahay arginine, glutamic acid, histidine, methionine, cystine. Sidoo kale, ma sababi doonto calool-xumadaas lallabbo iyo fal-celin xasaasiyadeed.
Sifa Cannabis Oligopeptide Faahfaahinta budada
Product Name Shahwada Cannabis Oligopeptide Powder
Color Jaale ama Jaale khafiifa
Waa maxay budada Semen Cannabis Oligopeptide?
Waqtigaan la joogo, budada shahwada ee loo yaqaan 'oligopeptide budada' waxaa inta badan loo isticmaali jiray goobta cuntada daryeelka caafimaadka iyo cuntada shaqeyneysa
Maxay yihiin faa'iidooyinka Semen Cannabis Oligopeptide powder?
Dhiirrigeliso beeryarada iyo habka dheef-shiidka
Semen cannabis budada peptide waxay xakamayn kartaa dheelitirka dhirta xiidmaha, taas oo leh saameyn laba-daweyn oo daaweyn ah oo ku saabsan caloosha iyo shubanka. Isla mar ahaantaana, waxay leedahay saameyn wanaagsan oo anti-boog iyo xameetida kor u qaadista.
Budada semen cannabis peptide waxay leedahay xanuun xoog leh iyo saameyn anti-nacaybka.
Caawinta hypolipidemic iyo hypoglycemic
Semen cannabis budada peptide waxay yareyn kartaa wadarta guud ee kolestaroolka iyo triglyceride, iyo sidoo kale heerarka sonkorta dhiiga. Waxay kaloo leedahay saamaynta nidaaminta dufanka dhiigga iyo sonkorta dhiigga.
La-dagaallanka daalka iyo hagaajinta difaaca jirka
Semen cannabis budada peptide waxay hagaajin kartaa adkeysiga jimicsiga, waxay kordhin kartaa maadada glycogen ee beerka, waxay yareyn kartaa dhiigga lactic acid, maadada nitrogen ee dhiigga urea, waxay leedahay saameyn antifatigue; Intaa waxaa sii dheer, waxay si weyn u wanaajin kartaa shaqada difaaca jirka ee ka-hortagga unugyada, gaar ahaan awoodda faafitaanka ee Tlymphocytes iyo phagocytes, iyo dhammaystiran-ly waxay sare u qaadeysaa shaqada difaaca jirka.
Budada Semen cannabis peptide waxay leedahay shaqo antioxidant, taas oo si wax ku ool ah u xakamayn karta xagjirnimada bilaashka ah isla markaana yareyn karta heerka lipid peroxide, sidaas darteed waxay u ciyaareysaa saameyn ka hortag ah.
 Daraasada dawooyinka ee habka dheef shiidka ee hemp Kerne
 Acupuncture, Anti-lnflammatory, Antithrombotic Effects of Hemp Seeds (Qiyaasta Acupuncture, Anti-lnflammatory, Antithrombotic Effects of Hemp Seeds).
 Saamaynta Hemao Protein Powder ee Waxqabadyada Nafaqada iyo Jirka ee Jiirka xilliga Koraaya.
 Daraasad Hordhac ah oo ku saabsan Anti-daalka iyo Xakamaynta Xakamaynta Waxqabadka Hemp Seed Protein ee Jiirka.
Waxqabadka Antioxidant ee Waxsoosaarka 'Enzymatic Hydrolysis Products' ee Hemp